Conditioner amin'ny rivotra etona
Raharaha mila fiheverana rehefa mampiasa cooler etona etona etona mampihena angovo
Ny rivotra mangatsiaka amin'ny tontolo iainana, ny rivotra mangatsiaka azo entina mitondra etona dia manana tombony azo avy amin'ny fihenan-tsasatra tsara, rivotra sy rivotra, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana. Safidy mety ny fampiasana cooler etona etona etona hampangatsiatsiaka, saingy tokony hojerena ny antsipiriany sasany rehefa mampiasa, o ...
XIKOO cooler rivotra mitondra cool ho an'ny mpiasa ara-pitsaboana
Tamin'ny fiandohan'ny volana Jona 2021 dia niseho tranga maro voan'ny COVID-19. Nanome lanja lehibe izany ny governemanta eo an-toerana Guangzhou, ary nandray andraikitra avy hatrany mba hanao fitsapana asidra niokleika ho an'ny olom-pirenena rehetra ao Guangzhou. Mametraha teboka fanandramana asidra niokleôly marobe ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Miasa mafy ny mpiasa mpitsabo ary ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny mari-pana mahazatra amin'ny rivotra sy ny rivotra iainana etona miaro ny tontolo iainana.
Ny ankamaroan'ny rivotra mahazatra dia tsy dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary mandany herinaratra somary avo. Noho izany, ny cooler etona etona etona sy azo iainana amin'ny tontolo iainana dia manolo tsikelikely ny etona nentin-drazana. Ny cooler etona etona azo entina dia ambany ny herin'ny ...
Cooler azo etona etona etona
Ny cooler etona etona azo entina dia manana ny mampiavaka ny habeny kely, ny tahan'ny fahombiazan'ny angovo avo, ny feo ambany, tsy misy fametrahana, ary azo apetraka amin'ny trano samy hafa araka izay itiavany azy, ary ampiasaina be io. Ny cooler etona etona azo entina dia manana fitaovana marobe toy ny mpankafy, ambain-drano mangatsiaka, ...
XIKOO cooler rivotra mandray anjara amin'ny ady amin'ny valanaretina
isika olombelona dia nanomboka niatrika ny fitsapana goavana ny COVID-19 tamin'ny faran'ny taona 2019. Niely mafy izany, mafy tokoa, ary izahay fiantohana ara-tsosialy dia niteraka fahavoazana lehibe. Na izany aza, ny mpiasan'ny fitsaboana na inona na inona fiarovana azy ireo dia tonga hatrany amin'ny laharana voalohany amin'ny ady. Misaotra an'ireo mpitsabo izay ...
Ny fitsipiky ny fiasan'ny rivotra mangatsiaka azo entina sy ny fahalalana fikojakojana ny pad hihena
Ny cooler rivotra azo entina dia manana fitaovana marobe toa ny mpankafy, pad cool, paompin-drano ary tanky rano. Ny vatana dia ampiasain'ny plug-jiro sy fanaraha-maso. Ny chassis base dia miaraka amina casters efatra, izay afaka mampihetsika ny rivotra azo alefa hangatsiaka araka izay itiavanao azy ary avelao handeha tsara. Ny asa...
Fampiasana marobe ny rivotra mangatsiaka azo avy amin'ny etona amin'ny indostria samihafa
Ny cooler etona azo etona azo entina dia tian'ny orinasa sy ny orinasa noho ny vokany tsara, ny rivotra, ny fitsitsiana angovo ary ny endri-javatra sariaka amin'ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao, ny rivotra mangatsiaka azo entina dia be mpampiasa amin'ny indostria lehibe. Ny rivotra mangatsiaka azo entina dia tontolo iainana ...
XIKOO cooler cool noho ny atrikasa fanontana
XIKOO dia manana traikefa mihoatra ny 14 taona eo amin'ny sehatry ny rivotra sy ny fampangatsiahana ho an'ny atrikasa. miantehitra foana izahay ary manangona traikefa momba ny injeniera, noho izany XIKOO dia manana fomba fanao mahomby amin'ny fananganana sy ekipa tompon'andraikitra amin'ny fametrahana sy miasa amin'ny alàlan'ny ekipa Shenzhen Quanyin Graph ...
Afaka mangatsiaka ny mari-pana ambany kokoa ve ny rivotra?
Rehefa manomboka mihazakazaka ny mpankafy amin'ny rivotra mangatsiaka dia mamoaka onjam-peo mahery izy ary mitsoka tsy tapaka ao anaty efitrano. Mandritra izany fotoana izany, ny paompin-drano dia mandraraka rano ary mizara mitovy ny rano amin'ny pad mangatsiaka. mitroka ny rano amin'ny pad mangatsiaka, mifoka hafanana ny etona ary miteraka rivotra mangatsiaka. Avy eo ...
Tombony azo avy amin'ny rivotra mifono rivotra
Fanamafisana ny rivotra misy etona miaraka amin'ny fahombiazan'ny famindrana hafanana Ny fantsom-pifanakalozana hafanana dia mandray ny karazana fantsom-panafody izay tsy hiteraka fikatsoana ivelany. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo orinasa manana kalitaon'ny rano mivezivezy ary miteraka fikajiana sy fanakanana ny hafanana excha ...
XIKOO cooler air an'ny tobin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana
Nafanafana ny volana aprily tao Chongqing, any atsimo andrefan'ny Sina. Ary izy koa dia iray amin'ny tanàna mafana indrindra any Shina. Ny departemanta polisy misahana ny fifamoivoizana Chongqing dia nanambara ny fividianana fividianana rivotra mangatsiaka mora entina kokoa tamin'ny fiandohan'ny volana aprily, ny mpizara XIKOO ao Chongqing dia nandray anjara tamin'ny tolotra niaraka tamin'ny XK-15SY ....
Fanamafisana rivotra misy vokany amin'ny angovo tsara
1. Izy io dia mandray rafitra mifanohitra amin'ny onja, ny fantsom-pifanakalozana hafanana dia mandray rafitra serpentine, lehibe ny isan'ny fantsom-pifanakalozana hafanana, lehibe ny fifanakalozana hafanana sy ny faritra fivezivezena entona, kely ny fanoherana entona ary avo ny fahombiazan'ny fifanakalozana hafanana ; ny habaka anatiny an'ny cooler dia ...